Farsamada: laga bilaabo Casablanca ilaa Abidjan iyada oo loo sii marayo Kigali iyo Dakar, dagaalka xarumaha hubaysan ee Faransiiska - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA Teknoloj: laga bilaabo Casablanca ilaa Abidjan iyada oo loo sii marayo Kigali iyo Dakar, dagaalka xuduudaha Faransiiska - JeuneAfrique.com
Farsamada: laga bilaabo Casablanca ilaa Abidjan iyada oo loo sii marayo Kigali iyo Dakar, dagaalka xarumaha hubaysan ee ku hadla Faransiiska - JeuneAfrique.com
Laga soo bilaabo Morocco ilaa Côte d'Ivoire iyada oo loo sii marayo Tunisia iyo Senegal, afar magaalo ayaa ku tartama xariifnimo si ay u soo jiitaan maal-gashadayaasha waaxda.
Dagaalkii xarumaha tikniyoolajiyadda Faransiiska
Nairobi, Johannesburg iyo Lagos ayaa hadda ah xarumayaashii ugu horreeyay ee tikniyoolajiyadda Afrika, oo soo jiidata kooxaha adduunka - oo ay ku jiraan kuwa ka socda Silicon Valley - iyo hal abuurayaal badan oo bilaaw ah.
Aakhirkii waxay ka helaan magaalooyinkan Ingiriisiga ku hadla inay yihiin deegaan u wanaagsan howlahooda: suuqyo waa weyn, adeegsiga ballaaran ee internetka ee taleefanka casriga ah - Kenya ayaa ah hormuudka adduunka ee lacagta mobile - iyo sidoo kale caymis shabakad heer sare ah, oo ay wadaan kooxo ay ka mid yihiin MTN iyo Safaricom.
Senegal, arday fiican
Intaas waxaa sii dheer, horumarintan waaxyaha tikniyoolajiyada waxaa taageera Dowladaha iyo kooxaha waaweyn ee sameeya iskaashi lala yeelanayo bilaabayaasha oo saami ku leh magaaladooda. Xitaa haddii, warbixintii ugu dambeysay ee sanduuqa khaaska ah ee 'Partech', kaas oo diiwaangelinaya bilowga waddanka, Senegal, ardayga ugu wanaagsan ee ku hadla Faransiis, wuxuu ku jiray 2018 kaliya oo ku yaal meesha 7e ee qaaradda, horteeda Rwanda (8e) , Tuniisiya (12e), Morocco (15e) iyo Ivory Coast (18e), waxyaabo ayaa socda.
Samaynta kooxo waaweyn oo raba inay horumariyaan waaxdan - sida Faransiiska Atos iyo Orange, laakiin sidoo kale alibaba Shiinaha ah -, isugeynta-bilowga ah ee heer gobol ama xitaa qaaradda, hagaajinta daboolka shabakadda, isku-dhufashada isugeynta iyo qaabdhismeedka taageerada, deegaanka ee Casablanca, Tunis, Dakar iyo Abidjan si wanaagsan ayaa loo horumariyey.
Hadda, magaalooyinkan waxay u dagaallamayaan sidii ay u soo jiidan lahaayeen maal-gashadayaasha. Markii laga faa iideysto awoodeeda dhaqaale, Abidjan wuxuu doonayaa inuu la qabsado Dakar, oo isagu isu aasaasey shaybaarka fransiiska ee qaybta. Dhiniciisa, Tunis wuxuu rajeynayaa inuu ku sasabo kooxaha waa weyn sida ugu Casablanca, isagoo soo bandhigaya Xeerkiisa Bilaabashada.
Dhallinyarada Afrika dalxiis magaalooyinkan, adoo muujinaya hantidooda iyo sidoo kale curyaamiintooda. Iyada oo uu ku qarxay adeegsiga internet-ka mobilada aagga ku hadla Faransiiska, qaybta tikniyoolajiyadda cusubi waxay daruuri u noqon doontaa inay ku tiirsanaato afartan magaalo.
Dalagyada iyo caanuhu waxay la il daran yihiin tartan yididiilo la’aan ah oo ka jirta Yurub, sida uu sheegay Coordination Sud - JeuneAfrique.com
Teknoloj - Dagaalkii Hubs: Amniyo Weyn ee Kigali - JeuneAfrique.com
Tale wuxuu u sheegay ciyaartooyda: dadaalka ugu yar inta lagu jiro galmada
Safiirkii hore ee Faransiiska ee Mali ayaa iftiimiyay ereyada Salif Keita isagoo aan cudurdaar u haynin
Laba ayaa la dilay, daraasiin kiis ah oo looga shakiyay